Proscenic P8 ကြိုးမဲ့၊ လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်းဈေးနှုန်း ...
အစအိမ်Proscenic P8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်း
Proscenic P8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်း
Proscenic P8 စမတ်ကြိုးမဲ့ Handheld ဖုန်စုပ်စက်
Proscenic P8 ပြန်လည်သုံးသပ်: ဤစျေးပေါနှင့်စွယ်စုံကော့ဒလက်စမ်းသပ်စဉ်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Proscenic P8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်း
100 - 240V, 21.6V (အလုပ်ဗို့)
35 မိနစ် (အနိမ့်ဂီယာ), 25 မိနစ် (မြန်နှုန်းမြင့်ဂီယာ)
X ကိုက x 70.00 30.00 14.00 စင်တီမီတာ x ကို 27.56 11.81 5.51 လက်မ x ကို
လှံတံ, 1 က Round စုတ်ယူခြင်း, 1 x ကိုအားသွင်းကိရိယာ, 1 x ကိုဖုန်စုပ်စက်ပင်မယူနစ်, 1 လမျးဖွောငျ့စုတ်ယူခြင်းဌာနမှူး 1 မြေပြင် Brush စုတ်ယူခြင်းဌာနမှူး 1 x x x 1 x ကိုဖုန်စုပ်စက်စုတ်ယူခြင်းဌာနမှူးသိုလှောင်သိမ်းတန်း x, 1 ဖျ Feather ပရိဘောဂ Brush, 1 x x ကအမှတ်တရအင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x အသုံးအဆောင်, 1 ဆှဲ
Proscenic P8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်းဗီဒီယိုများ
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Proscenic P8 ကြိုးမဲ့, လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် - တံမြက်စည်း
Norbert - 2019 10 ဇွန်
zdjęcieရဲ့będzie🙂Kupiłem za 99 $ dostawa ဒီတော့sięအီးယူပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ရဲ့opłaca.Mamစိတ်ဝင်စားဖို့ jeszcze Dyson ဟာ fluffy V6 w ze się fajniejszym wyposażeniem z / szczotka မ DYWANOW ဈpłaskich.Będzieအဆိုပါporównanie Dyson ဟာ powierzchni တစ်ဦးဆန္ဒပြဆိုပါစို့ - Mercedesa Fiat ပြုပါ - P8 .Kilkuletni Dyson ဟာကိုယ့် silniejszy သာ. ရွှတ်, porównując szczotka Dyson ဟာပျားတူးသိမ်းဆည်းမှုများကိုတရားဝင်ဈ wszystko ပူးတွဲważne szczotka ရဲ့မျက်ရည်ရွှတ် kilka zaplątanychအလွန်သန့်ရှင်းသောအရပ်ဌာန zbieranego တိုင်းရာသီဈက wszystko ။ Natomiast czyszczenie szczotka ရွှတ်ဈ trudniejsze odkurzacza jak ။ ပါမယ် Czas pracy ။ P8 cichutki nawet przy włączonymတာဘို, zbieranie စိတ်ရောဂါဆေးရုံတစ်ဦးပျက်ကွက်ဖို့ z dywanu włosów။ Dyson ဟာမှ Nie ရွှတ် Odkurzanie pane w Norm ale ။ Przy cenie 99 $ z dostawa gratis chyba warto ။ Osoba, któraရဲ့ ZNA Dyson ဟာbędzie bardzo zadowolona ။ အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါရန်မေ cos mocniejszego Pare $ dołożyć warto မဟုတ်လော Wybórသင်ပြုnależy။ Nie wierzcie prezentacjom produktów z YouTube ကို wszystko ရွှတ်စူပါ zawsze ရန်ဈ wszystko အဆိုပါ gander można။ ငွေအဇ Pare အပိုင်းပိုင်းmożnazrobić wszystko 🙁
Manfred - 2019 10 ဇွန်
ich braucht einen Staubsauger သားမွေး TEPPICHBODEN, Laminatboden und einen သားမွေး Das အော်တို။ ဒါ့အပြင် Akku-Sauger Ein သောအရာကို Nur Frage und ich habe တွင်း၌၎င်း, GearBest gefunden.Der Zusammenbau des Proscenic P ကို ​​8 IST sehr einfach အကြီးအကဲ eine vorhanden IST ပေမယ့်ငါ braucht dazu Bedienungsanleitung မရှိကြပါဘူး။ Nach တို့ Aufladen Das Gerät wurde erst einmal getestet ။ သားမွေးတွင်း Laminatboden ich zweite Stufe zuschalten သေဆုံး erste Stufe, TEPPICHBODEN musste သားမွေးတွင်းသေဆုံး reicht ။ Das Ergebnis ဦးထုပ် mich überzeugt; eine sehr gute Saugleistung ။ da der Akku nach ca. 20 Minuten Ende စစ် ich hätte gerne einen zweiten gehabt ဖြစ်၏။ es, auch Nachteil gibt aber mich persönlich betreffen.Als Wandhalterung သေဆုံး erstes သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ Das Staubsauger Einhängen direkt beim geladen wird.Zweitens Das Saugrohr Der ဒီတော့ငါသေ Wandhalterung integrieren könnenအတွက် Das Ladegeräthätte။ Hier Wares Ein Rohr Teleskop- besser.Alles allem noch IST es Ein sehr guter Staubsauger အတွက် ich jedem empfehlen kann Den ။ သားမွေးတွင်းလုယူရာဥစ္စာ er unschlagbar IST ။
Twann Foster - 2019 10 ဇွန်
အပြည့်အဝထုတ်ဖော် - - ငါကြောင့်ပါအိတ်စွပ်လေဟာနယ်သန့်စင်လိုချင်ငါတို့သည်အချို့သောမျိုးအကျဉ်းချုပ်ခွေးလှေးသို့မဟုတ်အိပ်ရာ bug တွေတစ် bug ကိုပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည် - ငါတစျဦးကိုငါမြင်၏ပေးထားပိုပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းခွေးလှေး, ငါလျောက်ပတ်စုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူတစ်ခုခုလိုချင်ပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ကိုစနစ်တကျအိတ်ဆမ်းနိုင် ငါပြုခဲ့သည့်သေတ္တာကလေးလေဟာနယ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖျြောဒီလေဟာနယ်ယခင်ကငါအခုထိကျနော်တို့ semi-plush ကော်ဇော, ငါတို့၏သစ်မာကြမ်းပြင်ကနေဒချိန်ညှိခြင်းမရှိကိစ္စများခဲ့ပြီးပြီ, ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ်မာကြမ်းပြင်များနှင့် tile ကိုအတွက်အသုံးပြုပေါင်း Dyson ဟာလေဟာနယ်ချောင်းကိုခဲ့ ဒါကြောင့်ဝေးစျေးနှုန်းအဘို့ငါကတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်